VaMugabe Vopika Kusadzokera Shure Mukuendesa Hupfumi kuVatema
Panguva iyo paine makakatanwa panyaya yekuti chirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema choitwawo mumabhanga here kana kuti kwete, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti hapana kudzokera kumashure pachirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema ichi.
Vachitaura pakuparurwa kwechikamu chehupfumi hwevagari munzvimbo inoshandira Mimosa muhupfumi hweMimosa, che Zvishavane Share Ownership Trust paMimosa Mine pedyo nedhorobha reZvishavane neChina, VaMugabe vakatsinhira mashoko ekuti hurumende yakatora danho rekuve nechirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema, kunyanya pazvicherwa nekuda kwekuti makambani ekunze aingomora hupfumi hwenyika achiendesa kunze, veruzhinji vachisara vachitambura.
VaMugabe vakati hurumende yakaona kuti nyaya yekuti makambani aregerwe achipa rubatsiro nenzira dzaaisarudza kuvanhu vemunharaunda dzinoshandira makambani aya, yaisapa pundutso kune veruzhinji.
VaMugabe vakati zvinofanirwa kuve pachena kuti hurumende haizi kuzodzokera shure pachirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema. Vakatiwo gurukota rezvekundesa hupfumi kuvatema, VaSavior Kasukuwere, vanofanirwa kutora matanho ekuona kuti makambni ekunze atevedzera chirongwa ichi.
Mashoko aVaMugabe anouya apo vanoziva nezviri kuitika vachiti kambani yeMimosa yaive yati yaida kupa hurumende zvikamu makumi matatu kubva muzana, pane kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe sezvinodiwa pasi pemutemo wekuendesa hupfumi kuvatema.
Pari zvino munyika mune makakatanwa aripowo pakati paVaKasukuwere negurukota rezvemari, VaTendai Biti, panyaya yekuunza chirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema mumabhanga. Asi VaMugabe hapana chavakataura pamusoro penyaya iyi.
VaKasukuwere, avo vakataurawo pagungano iri, vakatiwo kushanda kwechikamu chehupfumi hwevagari mumakambani aya, kunofanirwa kuve pachena uye kusina zvehuwori mukati.
Kambani yeMimosa yakapa mamiriyoni maviri emadhora kuZvishavane Community Ownership Trust, uye inotarisirwa kupa mamwe mamiriyoni masere emadhora munguva pfupi iri kutevera.
Seshiri yagara ine muririro wayo, VaMugabe vakatsoropodza nyaya yehungochani vakati haizi tsika yechivanhu. Vakaenderera mberi vachikurudzira madzishe kuti ashande zvakasimba mukuchengetedza tsika dzechivanhu.
Mumiriri wemadzishe, Ishe Ngungumbane, vakatenda VaMugabe nekukoshesa madzishe pachirongwa ichi vachiti madzishe anofanirwa kuremekedzwa sevanhu vanochengetedza hunhu pamwe chete nezviwanikwa zvemunyika.
Mumwe wechidiki anogara pedyo neMimosa, uyo akangozvidoma nezita rekuti Marufu, akarumbidza chirongwa ichi achiti mari ichange iri muhomwe yeZvishavane Community Share Ownership Trust inogona kubatsira vechidiki kuti vakwanise kutanga zvirongwa zvakasiyana-siyana.
Mumwewo mugari wemuZvishavane, VaBoaz Hove, vakarumbidzawo chirongwa ichi vachiti chichabatsira mukuunza budiriro munharaunda mavo.
Zvishavane Community Share Ownership Trust ndeye chitatu pasi pechirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema munyaya dzezvicherwa.
Chirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema chiri kukonzera makakatanwa munyika vamwe vachiti chinodzinga vemabhizimisi vekunze vanenge vachida kusima mari dzavo munyika.